अन्धकार अनन्त | मझेरी डट कम
kbs — Sat, 07/26/2008 - 11:34
अचानक उसका त्यस्ता कुरा सुनेर मेरो झन्डै सातो गयो। यसो हेर्दा मर्न आँटेको मान्छे छ, उद्धार गरिदिन भन्छ। अब यसले निकै पैसा कुम्ल्याउने भयो भनेर म मनमनै निकै अत्तालिएँ । आजभोलि सहायताको नाममा माग्न आउने जस्ता पनि मानिसहरू भेटिन्छन्। को साँचा हुन् र को झुटा पत्ता लगाउनै गाह्रो। फेरि मृत्युको मुखबाट बाँचेर आएको भन्छ, के भएको छ यसलाई ? कि युद्धपीडित हो या साँच्चैको घातक बिरामीको चपेटामा परेको छ कि ? कि विशुद्ध ठग हो। मैले धेरै यस्ता ठगहरूलाई देखेको छु जसले दुःखको सजीव अभिनय गरेर साधारण मानिसलाई सजिलै थाङ्‌नामा सुताइदिन सक्छन्। अझ आफूले काम गरेकै कलेजमा त त्यस्ता ठग व्यापारीहरू आरामले 'ट्रेनिङ'का नाममा व्यापार गरिरहेका हुन्छन्। केही बोल्यो भने यो ‘बाठो भयो‘ भन्ने भनाइ पाइएला भन्ने डर।
“अरे...........!” म अवाक् भएँ। घोर आश्चर्यमा परेँ। यो के सम्भव छ र ? कि म सपना देख्तै छु। यो मान्छे त ‘सुकरातका पाइला’को नायकजस्तो पो छ त। अनन्तजस्तो। हिजोमात्र मैले डा. गोविन्दराज भट्टराईको ‘सुकरातका पाइला’ पढिसिध्याएको थिएँ। पढेको एक मिनेट पनि नबिती उहाँलाई फोन गरेर बधाई दिएको थिएँ। खुसी व्यक्त गरेको थिएँ। ‘देशमा घटेका घटनाहरूको यति सजीव चित्रण मैले यसभन्दा अघि कहिल्यै नेपाली साहित्यमा पढ्न पाएको थिइनँ सर !’ भनी भनेको थिएँ। यसरी भोलिपल्टै उपन्यासको पात्र मेरा सामु पाउँदा मैले कसरी विश्वास गर्नु ? मेरा आँखाहरू उसबाट हटेनन्। म मानौँ जड़ भएँ उसका सामु। यो उपन्यासको पात्र कसरी आयो त ? उसले मानव रूप कसरी लियो ? कि ऊ भ्रममात्र हो ? मेरो जड शरीरभित्र प्रश्न र जिज्ञासाहरूको भुमरी नै परेको थियो।
म अझै पनि सामान्य हुन सकिरहेको छैन। सपना हो कि विपना हो ? तर सजीव पात्र आफ्ना सामु उभिएपछि उसका कुराको जबाफ त दिनै पर्‍यो- “अनन्त जी ! म यो कसरी गर्न सक्छु र ? यो काम त सर आर्थर कोनान डोयलले आफ्नो पात्र सर्लक होम्सलाई ब्यूँताएजस्तै तपाईँलाई पनि गोविन्दराज सरले मात्र पुनर्जीवित पारेर अरू कृतिहरूमा सम्मानजनक ठाउँ दिन सक्‍नुहुन्छ। तपाईँ उहाँको पात्र, यसमा मैले के गर्न सक्छु र ? हेर्नुहोस् कपिराइटको मुद्दा पर्‍यो भने मेरो त जिन्दगी नै खत्तम हुन्छ। केही सपनाहरूको खेती गरेर बाँचेको छु। तीनै सपनाहरूमा पनि बाढी आयो भने मैले के गर्नु ? भन्नुहोस् त ?"
ऊ त्यहीँ बसेर मलाई हेरिरहेको थियो। मैले भनेँ- "हेर्नुहोस् अनन्तजी ! अहिले मैले क्लास जानु पर्‍यो। तपाईँसँग म फेरि कुरा गर्छु।" भनेर मित्र राजेशमानजीलाई अनन्तको वासको व्यवस्था गरिदन अनुरोध गरेँ। अब बी.ए. तेस्रो वर्षमा गएर 'इलिमेन्ट्‍स अफ फिक्सन'मा मैले अनुभव गरेका कुरालाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने कुरा मनमा खेलाउँदै म लाइब्रेरीबाट बाहिर निस्केँ।
हिजो भन्दा अनन्त निकै बदलिएको रूपमा देखियो। दारीजुँगा काटेर कपाल कोरेर चिटिक्क परेको। तर अनुहारको ओज भने हिजोको जस्तो नै थियो। उसले देखाएका सोफामा बसिसकेपछि मैले नै कुरा अगाडि बढाएँ- "ल अनन्तजी ! अब सुनौँ तपाईँलाई परेको अन्याय। मैले उपन्यास पढ्दा त केही त्यस्तो लागेको थिएन। तपाईँका काम र भावनासँग, तपाईँको प्रेमसँग, तपाईँका गुरु सुकरातसँग, तपाईँका हरेक पाइलाका अप्ठ्याराहरूसँग हिँड्‌दा मलाई पटक्कै तपाईँमाथि अन्याय भयो जस्तो लागेको थिएन।देशकै त्यस्तो दुर्दशा भएका बेला त्यसरी माया गर्ने प्रेमिका गुमाएपछि, विदेश जान लाग्दा दलालका पञ्जामा परेपछि र कुसङ्गतमा लागेपछि, निराशाका चरम विन्दुहरू पार गर्दा मान्छेले मुक्तिको बाटो रोज्छ र तपाईँले पनि त्यही रोज्नुभयो। फरक त्यति मात्र हो कि तपाईँले आत्महत्यासम्बन्धी त्यति धेरै खोजबिन गरेर त्यही बाटो रोज्नु भयो, अरू कसैले मुक्तिको अर्कै बाटो रोज्थ्यो होला। खै मैले त केही अन्याय भएको देखिनँ। अनि फेरि अर्को कुरा, यदि अन्याय नै भएको हो भने पनि तपाईँ सिधै, आफ्ना लेखक गोविन्दराज सरकहाँ जानुपर्ने थियो। सिधै नगए सुकरात सरलाई भन्न लगाएको भए पनि हुन्थ्यो। तपाईँको साथी गोपीलगायत अरूहरू पनि त थिए होलान् ! तपाईँ मकहाँ यति टाढा किन आउनुभयो ? काठमाडौँमा पनि अनेक लेखक थिए होलान् ? तपाईँलाई इटहरी नै आउनुपर्ने कारण के त ? अनि फेरि मेरो ठेगाना र परिचय तपाईँले कसरी पाउनुभयो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँलाई मैले उद्दार गरिदिन्छु भन्ने कसरी लाग्यो ?"
मैले सम्भवतः मेरा मनभित्र उब्‍जेका धेरैजसो जिज्ञासाहरू एकैचोटि ऊमाथि खन्याएँ। मेरा यी कुराहरू सुनिँरहदा ऊ केही विचलित पनि देखियो। तर केही बेरमा शान्त भएर भन्न थाल्यो- "सर ! माफ गर्नुहोला। मैले तपाईँलाई भन्ने कुरा धेरै छन्। र मैले भनेका कुराहरू सबै सिलसिलेवार नहुन पनि सक्छन्। तैपनि म तपाईँलाई तपाईँका सबै प्रश्नहरूको जबाफ दिने कोसिस गर्नेछु। यतिका दिनसम्म, नर्फोकबाट काठमाडौँ आएपछि लेखकको हातको कठपुतली भएर बाँचिरहेँ। लेखकले जसो चाह्यो त्यसै गरिरहेँ। मैले विद्रोह गर्न सकिनँ। सकिनँ पनि कसरी भन्नु पात्रले लेखकसँग विद्रोह गर्नै सक्तोरहेनछ। पात्र भनेको लेखकद्वारा निर्मित चरित्र, जसरी चाह्यो त्यसरी नै नचाउन सक्‍ने।
मैले यही एउटा काम लेखकसँग लुकेर गरेँ सर। मैले कम्प्युटर सिकेँ। क्याफेमा धाउन थालेँ। इन्टरनेट सर्फ गर्न थालेँ। खोइ किन हो, उच्च शिक्षा हासिल गर्न नर्फोकबाट आएको ठिटोले कम्प्युटर सिक्छ र इन्टरनेटमा खोजीनीति गर्छ भन्ने कुरो लेखकले चाल पाउनुभएन। यही कुरो मैले उहाँबाट लुकाएँ। भनौँ न उहाँबाट जोगिन सफल भएँ। सरको नाम र ठेगाना मैले इन्टरनेटबाटै लिएको हुँ। सरलाई केही प्रश्नहरूको जबाफ मिल्यो कि ?"
उसले टेबलमा राखेको जगबाट गिलासमा पानी सारेर दुई गिलास पानी पियो र फेरि भन्न थाल्यो- "तर सर ! मैले अरु कुराहरूमा लेखकलाई केही गरी झुक्याउन सकिनँ। मनमा जे भए पनि यन्त्रमानवजस्तै लेखकले जे चाहनुभयो त्यही गरिरहेँ। मलाई अस्तित्वमा ल्याउने त उहाँ नै भएकाले होला मेरा इच्छा र आकाङ्‌क्षाहरू मेरा कर्मभन्दा गौण हुन पुगे ।
अझ लु सुनको कथासङ्ग्रह 'सेलेक्टेड स्टोरीज अफ लु सुन'मा उनका केही शब्दहरू पढेपछि त मलाई उनको बाटो पछ्याउनुमा नै जीवन सार्थक छ जस्तो लाग्यो। उनले समाजमा परिवर्तन ल्याउनका लागि साहित्य नै सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएर लेख्‍न थालेका थिए। उनका कथाहरू पढ्दा लाग्छ, उनको लेखनीले मानिसको चेतलाई यसरी कोट्याउँछ कि मानिस सोच्न बाध्य हुन्छ, घोरिन बाध्य हुन्छ र केही गर्न बाध्य हुन्छ।
भो धेर कुरा गरेँ हुँला सर। मैले धेरै पढेको छु भन्न चाहेको हैन। तर म उच्च शिक्षा हासिल गरी लेखक बन्ने चाहनाले चाहिँ पक्कै काठमाडौँ आएको थिएँ। नेपाली साहित्यकै पनि प्रभावशाली लेखकहरूलाई पढ्दा मलाई लेखनको महत्त्व र प्रभाव राम्रैसँग थाहा भैसकेको थियो।"
अनन्त यति भनेपछि उठेर टोइलेटतिर लाग्यो। म र राजेशमानजीले मुखामुख गर्‍यौँ। उहाँले पनि 'सुकरातका पाइला' त पढ्नुभएको थियो। अनन्तको कथा सुनेपछि उहाँको अनुहारमा विचित्रका भावहरू आउन थालेका थिए।
म पनि सामान्य थिइनँ अर्थात् भनौँ सामान्यता र असामान्यताको बीचमै थिएँ। उपन्यासको पात्र वास्तविक जीवनमा मानिसको रूपमा आएपछि म ट्रान्समै थिएँ। अझ राजेशमानजी त झुमिरहनुभएको थियो। यस्तै स्थितिमा अनन्त फर्केर आएपछि मैले फेरि प्रश्न राखेँ- "अनि अनन्तजी, पूर्णिमाको मृत्यु, जनयुद्ध र वैदेशिक म्यानपावर कम्पनीका कुरा चाहिँ के हुन् नि ? कि ती पनि तपाईँले चाहे विपरीत नै भएका हुन् या गोविन्दराज सरले त्यता पनि अन्याय गर्नुभएको छ ?"
पूर्णिमाको मृत्युको प्रसङ्गले अनन्तको अन्तःस्करणमा कतै चस्स घोचेछ क्यारे, कागतीलाई घोच्दा रस निस्केझैँ उसका आँखाहरू रसाए। तिनै आँखाका वेदनाहरूलाई लुकाउन खोज्दै अगाडि उसले भन्यो – "सर ! पूर्णिमाको मृत्यु एउटा त्राशद सत्य हो। जनयुद्ध यो विचरो देशले भोगेको यथार्थ। इतिहासको यो कालखण्डबाट न म नै मुक्त छु न मजस्ता अरू पात्रहरू। नेपालमा बस्‍ने वा बाहिर बस्‍ने नेपाली जो कोही होस् उसले जनयुद्धको त्राश उत्तिकै भोगेको छ, हामीहरू सबै एउटै हिसाबमा पिल्सिएका छौँ, डढेका छौँ। यही जनयुद्धले मेरी प्रेमिकालाई खोस्यो, यो भन्दा बढी सत्य के हुन सक्छ र ?
यो जनयुद्ध सुरु गर्दा सायद यसका पछाडि राम्रै कारणहरू पनि थिए होलान्, कुनै पवित्र उद्देश्य बोकेरै युद्ध लडिएको हुनुपर्छ। तर सर युद्ध युद्ध नै हो, युद्ध गर्नुभन्दा अघि जेजति भने पनि युद्ध गर्दा ती भनेका कुराहरू गौण हुन जाँदा रहेछन्। मानवाधिकार, सार्वजनिक सम्पत्ति, सर्वसाधारणको ज्यान सबै युद्धका बाधकहरू हुँदा रहेछन्। जित्‍नुपर्छ र जित्‍नैपर्छ। युद्ध जित्‍नका लागि चाहे जे गर्नु परोस्। सायद गुरिल्लायुद्ध भनेको यही हो क्यारे। मलाई त त्यति थाहा छैन। तर यही गुरिल्लायुद्धले मेरी पूर्णिमाको ज्यान लियो।"
अनन्तले अगाडि भन्यो – " सर ! जनयुद्धबारे र सुकरात सर बारे मलाई गोविन्दराज सरसँग कति पनि गुनासो छैन। देशले जे भोग्यो त्यही मैले पनि भोगेँ। सुकरात सरप्रति त अझै पनि कृतज्ञ छु, उहाँले जिन्दगीभरको कमाइ मलाई विदेश पठाउन खर्च गर्नुभएको छ। उहाँका जीवनदायी वाक्यहरूले मलाई कहिलेकाहीँ घोर निराशाको सागरबाट उद्दार गरेका छन्। म जबजब आपत् पर्थ्यो त्यति बेला सुकरात सरकामा नै जान्थेँ। मैले त्यसरी म्यानपावर कम्पनीलाई पैसा दिएर विदेश काम गर्न जाने बारे कहिल्यै सोचेको थिइनँ। मलाई त राम्ररी पढेर एमए पास गरेर कुनै विदेशी विश्वविद्यालयमा ससम्मान पढ्न जान मन लागेको थियो। तर यहाँ पनि म लेखकद्वारा ठगिएँ, सर। मलाई लेखकले पहिलो वर्षमै भर्ना गराइदिएर एमए फेल गराइदिनुभयो। यहाँ मलाई अर्को अन्याय भएको छ। सायद यही अन्यायलाई ढाकछोप गर्न हो क्यार पछि मलाई लेखकले सुकरात सरकहाँ लिएर जानुभयो। सायद लेखकलाई सुकरात सर मेरा लागि के हुन् भन्ने कुरो पत्तो लागेरै होला उहाँले त्यसो गरेको।
यो कामप्रति चाहिँ म लेखकसँग साह्रै आभारी छु। लेखकले नै हो मलाई सुकरात सरजस्तो दार्शनिकसँग भेटाइदिनुभएको। सुकरात सरको ऋण त म आजन्म तिर्न सक्तिनँ। आफ्नो रहेसहेको सञ्चयकोषको रकम झिकेर एउटा मजस्तो एमए फेल भएको विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने कोसिस गर्नुभयो। त्यसभन्दा माथि सुकरात सरका कुराहरू साह्रै जीवनदायिनी थिए। निराशाका चरम बिन्दुहरूमा पनि उहाँको कुनै कुरालाई हेर्ने दृष्टिकोणले मलाई अत्यन्त ऊर्जा थपेको छ सर !"
"सर ! सुकरात सरको सङ्गतले गर्दा मैले धेरै कुराहरूमा सतर्कता अपनाउन थालिसकेको थिएँ। विदेश जाने क्रममा पनि मैले म्यानपावर कम्पनीको वैधता जाँच गरिवरि मात्र कदम चालेको थिएँ। गाउँका दुई भाइहरूसँग उड्न लागेकै बेलामा इराकमा नेपालीहरूको हत्याले सल्काएको आगोले हामी धेरैको सपना पनि डढायो सर। यसमा गोविन्दराज सर एकदम ठीक हुनुहुन्छ। यस ठाउँमा उहाँप्रति मेरो गुनासो के भने, म राम्रै म्यानपावर कम्पनीमा गएको थिएँ। त्यो ठग डेभिडकहाँ गएको थिइनँ। यहीँ मलाई अर्को सानो अन्याय भयो सर। तर पछि अझ अर्को ठूलो अन्याय गर्नुभएपछि मलाई यी साना तिना कुरामा केही भन्नु छैन सर !"
"सर ! भन्छन् राम्रा मान्छेहरूका बीचमा एउटा नराम्रो मान्छे आयो भने, राम्राका प्रभावले त्यो पनि राम्रै बन्छ रे ।तर नराम्राहरूका बीचमा सोझो र इमान्दार मान्छे बाँच्न सक्तो रहेनछ। ऊ पटकपटक मर्दो रहेछ सर। मलाई कहिले काहीँ त्यस्तै लाग्छ, म दुष्टहरूको बीचमा छु र कहिल्यै त्यहाँबाट उम्कन सक्तिनँ। 'सुकरातका पाइला'मा पनि सायद गोविन्दराज सरको त्यस्तै बाध्यता हुँदो हो। मलाई नराम्राहरूको बीचमा फँसाइसकेपछि उहाँले मलाई फेरि उद्दार गर्न सक्‍नुभएन।"
सगुन स्विट पार्लरमा बसेर बन्दाकोपीको मोमो र रसमलाई खाँदै गर्दा मैले राजेशमानजीलाई सोधेँ- "के छ राजेशमानजी ! कस्तो अनुभव भैरहेको छ त ?"
राजेशमानजीले निकैबेर ट्‍वाल्ल परेर मलाई हेरे र भने- "मलाई त चार बोतलको नसा चढेझैँ भएको छ हौ सञ्जीवजी। सपना हो कि बिपना ? म अल्झिएको अल्झियै छु। हेर्नुहोस् न त्यो भाइ त्यही अनन्त हो त ? मैले त अर्कै अनुहारको कल्पना गरेको थिएँ। उपन्यास पढ्दा जुन चित्र उसको मेरो मनमा थियो यो बिलकुलै मिल्दैन नि त? अनि फेरि त्यो मान्छे किताबबाट निस्केर कसरी तपाईँका सामु आयो ? मान्छे कहिल्यै त्यसरी किताबबाट निस्कन सक्छ र?”
तर सर मैले बाँच्नु रहेछ। मैले 'ग्लुमी सन्डे' जस्तो गीत- जो सुनेर कैयौँले आत्महत्या गरेका छन् – सुनेर पनि आत्महत्या गर्न सकिनँ। म मर्न सकिनँ सर ! किनभने ममा जीवन बाँकी थियो। गोविन्दराज सरले छाडेपछि म त्यहाँबाट हिँडे र यहाँ आएँ।"
मैले फेरि प्रश्न गर्ने हिसाबमा मुख खोलेँ- "अनि मै किन ...................?"
उसले फेरि हतारहतार भन्यो – "सर ! मैले बुझेँ सरको प्रश्न। इन्टरनेट सर्फ गर्दा तपाईँका कथाहरू दोहोर्‍याइ तेहेर्‍याई पढेँ। मलाई लाग्यो तपाईँले तपाईका कथाका पात्रहरूलाई जुनसुकै कथामा पनि न्याय गर्नुभएको छ। चाहे नायक हुन् या खलनायक उनीहरूको गरिमामय उपस्थिति छ सरका कथाहरूमा। त्यसैले मलाई पनि पक्कै न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने ठूलो आसले आएको हुँ सर म तपाईँकहाँ।"